Filim laga sameeyey dagaalka AMISOM Muqdisho ayna ku qirteen mid adag – SBC
Filim laga sameeyey dagaalka AMISOM Muqdisho ayna ku qirteen mid adag
Posted by editor on Noofember 14, 2011 Comments
Taliska ciidamada AMISOM ee ka socda midowga Afrika ayaa sadexdii sano ee la soo dhaafay waxay hawlgal lagu baritaareyo dawlada KMG Soomaaliya ka wadaan magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya, waxaana ay galeen dagaalo xoogan oo joogto ah oo ay la galeen xoogaga Shabaabka.
Inkastoo dagaaladii ugu dambeeyey ee bilwodey horaantii sanadkan ciidamada AMISOM oo ay iskaashanayaan kuwa dawlada KMG Soomaaliya ay gaareen guulo dhanka goobaha dagaalka oo ay iska riixeen culeyskii dagaal ee Shabaabka ee sadexdii sano ee la soo dhaafay fooda u saarnaa kuna hayey guluf colaadeed oo aad u kulul, hadana waxay ku qirteen in dagaalka Muqdisho uu yahay mid culus.
Filim ka hadlaya hawlgalka AMISOM gaar ahaan dagaalada ayaa taliyaha ciidamada Ugandha ee qaybta ka ah hawlaglak AMISOM Brig. Paul Lokeck oo ka muuqda filimkan ay diyaariyeen AMISOM ayuu wuxuu qiray in dagaalada Muqdisho ay ku galeen ay ahaayeen kuwa aad uga duwan kuwii ay horey u soo arkeen taasi oo uu ku sheegay in ay ka mid tahay waxyaabaha aadka ugu adkaa goobaha lagu dagaalamayo oo magaalo dhexdeed, daaro dhaadheer, guryo iyo wadooyin.
Brig Paul Lokeck wuxuu sheegay in ciidamada Ugandha ay ka soo dagaalameen Koonfurta Suudaan & Congo (Ex-Zair) wuxuu sheegay in dagaaladaasi ay ahaayeen goobo banaan ama duur ah balse kuwa Muqdisho ay ahaayeen dagaalo magaalo, taasi oo uu ku tilmaamay mid aad u adag oo ay ku lumiyeen naf & maal fara badan.
Laakiin Brig Paul wuxuu farta ku fiiqay inay neefsan karaan xiligan isla markaana ay dareemayaan in culeys badan uu ka degay mar hadii sida uu sheegay ay Muqdisho ka saareen xarakada Shabaabka oo uu sheegay inay ku hayeen dagaalo joogto ah & weeraro ku dhufoo ka dhaqaaq ah.
Marka uu ka sheekaynayo Brig Paul sida xiligan u dareemayaan nasiinada waxaa ka muuqanaya Filimka ciidamada AMISOM oo dhoolo cadeynaya una muuqanaya inay ka nasteen dirirtii iyo u tooghayentii dagaalka Shabaabka.
Brig Paul wuxuu ku sifeeyey guusha ay ka gaareen dagaalada Muqdisho inay ugu muhiimsaneyd markii Shabaabka ay ka qabsadeen Suuqa Bakaaraha oo uu ku tilmaamay in uu ahaa ubucda ugu weyn ee ay ka dhaqdhaqaaqeyeen isla markaana ay ka helayaan waa sida hadalka uu dhigay’e dhaqaalaha ay ku dagaalamayeen, sidoo kale wuxuu xusey in degmada Boondheere ay u aheyd fursad muhiim ah qabsashadii ay qabsadeen iyo Jidka warshadaha gaar ahaan Ex control Balcad taasi oo ka dhigan inay Muqdisho gacanta ku wada hayaan.
Sidoo kale wuxuu Brig Paul intaasi ku darey in ciidamada AMISOM ay ku aheyd qidad dagaal oo aad weyn xeeladaha ay adeegsanayeen Shabaabka, gaar ahaan dhufeysyada iyo wadooyinka ay ka qodeen dhulka hoostiisa oo ay isaga gudbayeen furimaha dagaalka, waxaana filimka ka muuqanaya godad dhaadheer & dhufeyso dhulka hoostiisa oo ay Shabaabku qodeen oo ay u adeegsan jireen dagaalada iyo waliba guryo la isku duleeliyey.
Hadaba Filimkan oo ay ka muuqdaan sida ciidamada AMISOM ula qabsadeen dagaalada Muqdisho ayna uga dagaalamaayeen jidadka iyo luuqluuqyada darbiyada Xamar, iyagoo taangiyo adeegsanaya marmarna shiish iyo yool qabsanayo ka daawo Link-ga VIDEO-ga hoose.